नेपाली सेनाले घेरा हालेपछि घर छोडेर भागे प्रचण्ड, के हो यथार्थ ? • raradiodarpan.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एकदमै डर छेरुवा नेता भएको बताएका छन्। कट्टेलले प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कुटुवालसँग डराएर एक रात घरनै छोडेर भागेको खुलासा गरेका छन्।
तत्कालिन सरकारले रुक्मांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको रात प्रचण्ड घर छोडेर भागेको उनले भनाई छ। ओली टिभी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्रचण्डको सुरक्षा टिममा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले आफूलाई बताएको बताए। कट्टेलले त्यस दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रचण्डलाई अन्त कतै बाहिर अरुकै घरमा राखिएको थियो।
त्यसपछि बिहानै बालुवाटार पुर्याइएको थियो। सेनाले ‘कु’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई देखेर प्रचण्डलाई लुकाइएको उनको जिकीर छ। प्रधानमन्त्री निवास भित्रै असुरक्षित बनेर भाग्ने सम्भवत प्रचण्ड इतिहासकै पहिलो प्रधानमन्त्री होलान्। उनले भने, ‘प्रचण्ड कति डरपोक छन् भन्ने उदाहरण यही काफी छ।अहिले पनि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली सँग बेस्करी तर्सिएको उनको भनाइ छ।
प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तीहरु विक्षिप्तताको उपज भएको भन्दै कट्टेलले प्रचण्डको धम्कीको कोहि पनि नडराउँने बताए। ‘धुर्मसले ‘म त मर्छु की क्या हो’ भनेर हसाए जस्तै हो प्रचण्डले मर्छु भनेको’ उनले भने। ‘कहिले मरुँ मरुँ लाग्या छ भन्ने, कहिले वाइसीयललाई ठोक भन्ने यस्तो पनि नेताको बोली हुन्छ ? यो त पुरै जोकरको बोली हो। उनले भनेका छन्। वाइसियलले भन्दा पहिला युथ फोर्सले चाँही ठोक्ला भनेर पनि प्रचण्डलाई कट्टेलले सचेत बनाएका छन्।
माओवादी भन्दा एमालेनै बलियो शक्ती रहेको भन्दै कट्टेलले आफू भन्दा बलियो शक्तीसँग निहुँ खोज्दा ग्राहो पलाइ भन्दै सम्झाएका छन्। अब ६४ सालको माओवादी कुनै हातलमा पनि नहुने बताए। प्रचण्ड विहान एउटा कुरा गर्ने, दिउँसो अर्को कुरा गर्ने र बेलुका अर्को कुरा गर्ने मान्छे भन्दै कट्टेलले अब उनका कुरा कसैले नपत्याउँने पनि ठोकुवा गरे।
यसै गरि, विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको बेला प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले गरेको घोषणाले गठबन्धनलाई तनाव भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री आचार्यले भने आफूले विश्वासको मत पाउने ठोकुवा नै गरेका हुन् ।
उनको ठोकुवाले प्रदेश १ सरकार ढाल्ने कसम नै खाइसकेका एस पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई ठूलो तनाव हुने देखिएको छ। झापाको विर्तामोडमा आयोजित दसैं विशेष चियापान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत जुटाउन प्रयासरत रहेको र सफल हुने दाबीसमेत गरे।
अफ्ठ्यारो स्थितिमा आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको भन्दै उनले भने,‘सुरुमा हामीसँग बहुमत थियो, तर राष्ट्रियराजनीतिमा आएका समस्या (गज्याङगुजुङ)का कारण हामी अहिले बहुमतमा छैनौं। अरुसँग मिलेर बहुमत जुटाउने काम गरिरहेका छौं। त्यसमा सम्भव हुन्छौं भन्ने लागेको छ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्र सरकारले तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिएको विषयमा समेत कटाक्ष गरे। उनले भने, ‘जब सरकार बन्नै तीन महिना लाग्छ भने त्यसले कति दिनमा योजना बनाउँछ, र कहिले कार्यान्वयन गर्छ ?
यसै गरि, जनता समाजवादी पार्टीमा बज्रपात हुने भएको छ। सो पार्टीकी प्रभवशाली नेतृ नै नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन्। भारतीय चेली चर्चित नेतृ नेकपा माओवादीमा प्रबेश गर्न लागेपछि माओवादीमा खुसीयाली छाएको छ।
पूर्वसांसद एबम् जनता समाजवादी पार्टीकी कार्यकारणी सदस्य सरीता गिरी नेकपा मओवादी केन्द्रमा प्रबेश गर्ने भएकी हुन्। उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालीकै इमान्दार नेता रहेकाले माओवादीमा प्रबेश गर्न लागेको संकेत गरेकी हुन्।
नेपालको नक्सामा कालापानी लगायतका भूमि समावेश गर्दा विरोध जनाएर सांसद पद गुमाएकी गिरीले नेपालका अन्य नेताहरु भन्दा प्रचण्ड इमान्दार देखिएकी बताएकी हुन्। सांसद पद गुमाएपछि सामाजिक संजाल मार्फत आफ्ना भनाईहरु राख्न सक्रिय भएकी गिरीले फेसबुकमा एक स्ट्याटस राख्दै अरु नेताको तुलनामा प्रचण्ड नै इमान्दार रहेको बताएकी छन्।
‘जनयुद्धको आफ्नो इतिहाससंग प्रचण्डले नाता तोडेका छैनन् र त्यसको दायित्वबाट पनि भागेका छैनन्।’ गिरीले प्रचण्डका बारेमा थप लेखेकी छन्। अन्य नेताहरु जस्तो प्रचण्ड आफ्नो दायित्वबाट नभागेको गिरीको बुझाई छ। उनी लेख्छिन्, ‘उनी भगौडा जस्तो देखिएका छैनन्।
गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद र सडकमा चर्को आवाज उठेको थियो। त्यसपछि उनलाई समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद पदबाट हटाएको थियो। गिरी केपी ओलीको कटु आलोचक मानिन्छिन्। एक पटक उनले ओलीका कारण आफ्नो पद गएको आरोप लगाएकी थिइन्।
साथै उने सांसद पद बचाउन अदालतको समेत सहारा लिएकी थिइन्। जुन उनको प्रयास असफल भएको थियो। प्रचण्डको समर्थनमा बोल्न थालेपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्न लागेको चर्चा शुरु भएको छ। पार्टी विहिन भएकी गिरी माओवादी प्रवेश गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ। तर यस विषयमा प्रष्ट भने भैसकेको छैन।